TaxJar Inotangisa Emmet: Kutengesa Mutero Artificial Intelligence | Martech Zone
Rimwe rematambudziko akasetsa e-commerce mazuva ano nderekuti hurumende dzese dzemunharaunda dzinoda kusvetukira pabhodhi nekuraira yavo vega mutero wekutengesa kuti vawane mari zhinji mudunhu ravo. Kubva nhasi, pane apera 14,000 mitero yekutonga muUnited States ine zviuru zvitatu zvemitero yezvigadzirwa.
Wepakati munhu ari kutengesa fashoni online haazive kuti iyo fur yavakawedzera kune chimwe chigadzirwa ikozvino inokamura zvipfeko zvavo zvakasiyana uye inoita kuti kutenga kwacho kubhadhariswe muPennsylvania… nyika isingatore mutero wekutengesa pazvipfeko, neimwe nzira. Uye unongova muenzaniso mumwe chete… iyi isingagumi runyorwa rwemitemo yemitero inoguma nemamiriyoni enzira dzekukanganisa kubhadharisa mari isiriyo yemutero wekutengesa… uye izvo zvinogona kupinza bhizinesi rako mudambudziko.
Maitiro ekumaka chimwe nechimwe chezvigadzirwa zvako nekodhi yemutero yezvigadzirwa zvinogona kutora maawa uye kuunza kushushikana kuzhinji kune munhu anobata mutero wako wekutengesa. Uye haisi imwe-nguva maitiro. Nguva dzese iwe paunowedzera maSKU matsva kune yako chigadzirwa musanganiswa, iwe unofanirwa kuve nechokwadi kuti dzakanyatsorongwa.
MuteroJar wakachera mune iyo data, uye, uchifunga izvi zvese zvekutsvagisa kusvika paminiti paSKU, zvaizotora mutengi anotengesa angangoita 3,000 SKUs Maawa makumi mashanu ekuronga zvigadzirwa zvavo.
Emmet: Mutero Wemutero Unyanzvi Hwokugadzira
MuteroJar wakagadzirwa Emmet, indasitiri yekutanga zvine hungwaru zvine hungwaru mutero wekutengesa kupatsanura robhoti. Yakavakwa mumba neinjiniya veTaxJar, Emmet inoshandisa muchina kudzidza kuchengetedza nguva yeTaxJar yevatengi zvangoerekana zvaitika kuenzanisa zvigadzirwa zvavo nekodhi yemutero.
Kubva kutanga kwegore ra2020, Emmet akatoratidza 90% yekubudirira mukunyatso kuronga zvigadzirwa zveTaxJar. NaEmmmet, kurongedza izvo 3,000 zvigadzirwa zvinongotora maawa mashoma. Uye nekuti inofambiswa nemuchina wekudzidza, Emmet inova nehungwaru uye nekujeka pane chimwe nechimwe chigadzirwa chitsva chainoronga.
Emmet inorerutsa mashandiro echikamu chechigadzirwa, inovandudza kurongeka uye inopa vatengi vedu nevatinoshanda navo kuvimba kwekuziva bhizinesi ravo kunotsigirwa neiyo chaiyo uye yepamusoro yekutengesa tekinoroji chikuva pamusika.
Alec Carper, MuteroJar Director weinjiniya
Parizvino, Emmet inobatsira vatengi veTaxJar avo vanokamura zvigadzirwa zvavo mukati meTaxJar app. Mumwedzi iri kuuya, Emmet achashanda nevatengi veTaxJar vanoshandisa TaxJar's SmartCalcs mutero wemitero API kana vanounganidza mutero wekutengesa kuburikidza neCommerce nzira dzekutengesa (seAmazon, Shopify, BigCommerce, nezvimwewo)
Kumbira MuteroJar Demo
MuteroJar inopa eCommerce mabhizinesi kutora mutero wekutevera kutevedzera. MuteroJar zvakakwana otomatiki kutengesa mutero kuverenga, kuzivisa uye kufaira uye inopa yakanyanya kukwana chirongwa chekudyidzana kwetekinoroji, sevhisi uye mutero vanopa mazano. Pamusoro peAPI yavo, TaxJar ine kubatanidza kamwe-chete neNetSuite, Magento, Shopify, Walmart, Amazon, BigCommerce, Ecwid, WooCommerce, Squarespace, Square, uye Etsy.
Tags: aiAmazonAPIBigCommerceEcwidemmetMagentonetsuitemutero wekutengesashopifysquaresquarespaceMuteroJarWalmartwoocommerce
EDO: Kuyera Kwevatengi Kubatanidzwa muTV Kushambadzira